Thanksgiving ayaa had iyo jeer maalin fasax ah oo aad u dhaqanka wareegi hareeraha qoyska, turkey, iyo kubada cagta. Si kastaba ha ahaatee, kuwa idinka mid ah ee ku raaxeysanaya safarka isla markaana isticmaali kara deg deg deg deg ah waa inay tixgeliyaan ku bixitaanka xilligan fasaxa sannadkan mid ka mid ah magaalooyinkan ugu Fiican ee Booqashada Thanksgiving ee Yurub.
Europe waa sida caadiga ah buux la dalxiisayaasha, laakiin mid ka mid ah ma isku odhan kartaa dabayaaqadii November. Taasi waa sababta qaybtan sanadka ay tahay waqtiga ugu habboon ee la booqdo magaalooyin hore oo dib-u-soo-noolee caadooyinka Thanksgiving-ka oo leh cunno aad u fiican iyo midabbo dayrta oo qurux badan.
Kuwa idinka mid ah oo ka fiirsan cunto u noqon qayb muhiim ah Thanksgiving, waxaad ku yeelan doontaa saamigaaga cadaalad ah London. goobta cuntada halkan waa mid cajiib ah oo sida kala duwan sida mid dhabarka ku yaal magaalooyinka waaweyn ee gobolada. Waxaa jiri doona wax walba dhadhan.
Ma rabtaa in aad Cudarada our post blog gal goobta, sidoo kale aad qaadi karto sawiro iyo qoraal iyo kaliya na siiso credit ah la link a si post blog this, ama aad halkan riix: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-cities-visit-thanksgiving-europe%2F%3Flang%3Dso - (hoos u riixdaa si aad u aragto Code Cudarada ah)